39 Estate Drive, ePort Carling, e-Ontario P0b1j0
Real Estate Listings: » Residential homes » CA » Ontario » Port Carling » 39 Estate Drive, ePort Carling, e-Ontario P0b1j01
Enhliziyweni kaMuskoka eMarion Lake (engahambisani nezimoto) nokushona kwelanga okumangalisayo unyaka wonke usuka ethekwini lakho, kulo nyaka wesiko ikotishi / ikhaya lisemgwaqweni omkhulu wePort Carling endaweni yamakhaya e-Executive. Imizuzu engu-5 ukuqaliswa kwesikebhe somphakathi eLakes Rosseau / Jospeh noma eMuskoka nakuzo zonke izinto eziseThekwini. Joyina iPort Carling Golf Club eyaziwayo ngaphakathi kwebanga lokuhamba lokudla okuhle negalofu. Izinsizakalo eziphakeme nezikamasipala zifakiwe: Ikhaya lokulala eli-4/4 liqukethe ikhishi elibanzi elinemishini engenazinsimbi / izinto zokubala zegranite / igumbi elikhulu elinelwandle elikhulu elinendawo yokhuni oluqinile, udonga lwamawindi nezicabha ezishelelayo ezivulela kububanzi obugcwele bendawo ephelele yezinsuku zasehlobo ezivilaphayo . Jabulela indawo yakho yomlilo ekhoneni ebusuku. I-Main floor master ifaka okulandelayo futhi kunelinye igumbi / igumbi lokulala kuleli zinga. Ukufakwa kwezinyawo eziyishumi nanye ezingeni eliphezulu nangaphansi. Izinga elingezansi linamakamelo womndeni abanzi ama-2 (elilodwa elisetshenziswa njengejimu) amakamelo okulala ama-2 nezindlu zokugezela ezi-2. Uphahla oluphezulu, amalambu amaningi ebhodwe namafasitela amakhulu aselwandle nendawo yomlilo yesibili ye-propane. Phuma uye endaweni egcwele egcwele echibini nasendleleni yamatshe enqamula ezingadini ezihlala njalo kanye nombhoshongo onamahlathi uye egcekeni lakho langaphambili legranite kanye nebhavu elishisayo, eliseduze netheku elikhulu lokubukwa kokushona kwelanga. I-Generac Generator ifakiwe ukuqinisekisa amandla agcwele ngaso sonke isikhathi. Ukuhlehla komndeni okuhle noma ikhaya lomhlalaphansi! (id: 27) Izici ZokwakhaIzixhobo: Umshini Ophakathi, Umshini wokuwasha izitsha, iDryer, iMicrowave, i-Oven - Eyakhelwe ngaphakathi, Isiqandisisi, Isitofu, i-Washer, iTub TubIsitayela Sokwakha: I-BungalowBasement Development: Kuphele ingxenye : AkukhoExterior Finish: Vinyl sidingFireplace Fuel: PropaneFireplace Type: Other - See remarksUkuvikela Umlilo: Smoke DetectorsUhlobo Lwesisekelo: BlockHeating Fuel: PropaneHeating Type: Forced air
Ibhaliswe ku 8. Nov 2020
Ibhaliswe ku November 8, 2020